Maraykanka oo si adag u beeniyay inuu weerarayo Iiraan bisha soo socota - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maraykanka oo si adag u beeniyay inuu weerarayo Iiraan bisha soo socota
Maraykanka ayaa si adag u beeniyay inuu weerarayo Iiraan bisha soo socota. Warbixin ay diyaarisay warbaahinta Ustaraaliya ayaa lagu sheegay in Maraykanku diyaariyay weerarkii uu ku qaadi lahaa Iiraan gaar ahaan warshadaha Nukliyeerka.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in Ustaraaliya ay dagaalka kaga qayb qaadan doonto dhinaca sirdoonka iyo inay soo hesho goobaha Maraykanku duqeynayo inkastoo Maraykanku u baahneyn warbixin sidaasa oo isku filan yahay.
Waxay kaloo taabteen in Ingiriiskuna isna sidaasoo kale keeni doono goobaha la weerarayo halka Kanada iyo New Siiland ayna ka qayb qaadan doonin. Warbixintan ayaa imaanaysa ayadoo mudawakh Trump ay hadalo kulul is dhaafsadeen madaxda Iiraan.
Wasiirka difaaca Maraykanka ayaa si adag u beeniyay warbixintaas kuna tilmaamay mala awaal aan dhacayn. Madaxda Iiraan ayaa iyaguna sheegay in Maraykanku waxkasta ku waayi doono hadduu Iiraan soo weeraro.
Maraykanka ayaa hore uga fikirey inay weeraraan Iiraan waxayse go’aamiyeen inayna faaiido ka gaarayn. Iiraan ayaa Ruushka ka soo iibsatey gantaalo casri ah oo waxba kama jiraan ka dhigaya in Iiran cirka ka weeraraan maadama ayna awoodeyn inay dhul soo maraan.
Iiraan ayaa ah dawlad adag oo aan dagaal toosa waxba looga qaadi karin. Yuhuuda oo saadaalinaysay inay Iiraan weerarto ayaa ku dhici weyday markii Maraykanku kula taliyay inayna taageeri doonin ayna guulna ka gaareyn.